Dalkii ugu horreeyay oo casuumaad rasmi ah u fidiyay Xasan kadib caleemo-saarkiisa | Onkod Radio
Dalkii ugu horreeyay oo casuumaad rasmi ah u fidiyay Xasan kadib caleemo-saarkiisa
Muqdisho (Onkod Radio) – Wasiirka Beeraha Turkiga oo kamid ah wafdiga ka socday dowladda Turkiga ee ka qeyb-galay munaasibadda caleemo-saarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shaaciyay in madaxweynaha ay ku martiqaadeen inuu yimaado Turkiga.
Wasiirka ayaa munaasibadda ka sheegay in marti-qaadka madaxweyn Xasan ujeedkiisu yahay si loo hormariyo xiriirka labada dal walaalaha, Sidoo kale waxa uu Madaxweyne Xasan Sheekh la wadaagay dhambaal hambalyo ah oo uu ka siday Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyob Erdogan.
Dowladda Turkiga ayaa kamid ah dowladaha sida weyn u taageera Soomaaliya, waxayna kamid aheyd sanadihii u dambeeyay saaxiibada Soomaaliya ay ee siiya tobabarada ciidamada, Waxa kale oo lagu xasuusta inay aheyd dowladdii ugu horreeysay ee usoo gurmatay sanadkii 2011-kii markii dalka ay ka dhacday abaar xoogan.
Turkiga ayaa noqonaya dalkii u horeeyay ee casuumad rasmi ah u fidiya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo loo doortay madaxweynaha Soomaaliya doorashadii 15-ka May ka dhacday magaalada Muqdisho.
Si kastaba, ma cadda haddii madaxweyne Xasan uu Turkey ka dhigi doono dalka ugu horreeya ee uu booqdo iyo haddii uu dalal kale booqan doono kahor Turkey, balse waa wax loo joogo.